“Ibrahimovic kubbada ma Laadi karin markii uu ku soo biirayay Juventus.”. Fabio Capello – Gool FM
“Ibrahimovic kubbada ma Laadi karin markii uu ku soo biirayay Juventus.”. Fabio Capello
Byare December 25, 2017
(Europe) 25 Dis 2017. Joog dheere Zlatan Ibrahimovic ee ku caanka ah inuu goolka u beegsado siduu doono ayaa daaha laga rogay inuusan kubbada Laadi karin ama darbeyn karin markii uu ku soo biirayay Juventus sida uu sheegay Fabio Capello.
Dhaliyaha Manchester United ee iminka ayaa Marwada Duqda ah ku soo biiray 2004 kolkaa uu ka yimid naadiga Ajax ee dalka Holland.
36-jirka ayaa labo sano Serie A la qaaday Juve intaa kaddibna wuxuu sagaal horyaal la qaaday Inter Milan, AC Milan, Barcelona iyoParis Saint-Germain 10-sano uu la joogay.
Laakiin tababarihii hore ee xulka England Capell kaa oo hayay xilka kooxda reer Talyaani waqtigii uu Zlatan joogay ayaa ku mano sheeganaya laacibka.
“Markii uu Ibrahimovic yimid Juventus kuma fiiceyn Laadka/Shoot,” Macallinka reer Talyaani ayaa sidaa yiri.
“Wakiilkiisa Mino Raiola wuxuu igi yiri: ‘Zlatan aad ayuu dhabtii u xoogan yahay, wuxuu jabiyaa gacmaha goolhayeyaasha.
“Waxaan ku iri: ‘War i dhageyso ilaa iminka wuxuu jabiyay oo kaliya Daaqadaha GYM-ka.
“Intaa kaddib Zlatan wuxuu bilaabay inuu maalin kasta ku tababarto inuu kubbada laado, sida uu qofkasta ogyahayna wax badan ayuu is hagaajiyay.”.
Capello oo hadalkiisa sii wata isagoo u waramaya Sky Italia ayaa yiri:
“Ciyaaryahankii ugu fiicnaa aan tababare u noqdo wuxuu ahaa Ronaldo.
“Nasiib darro, waxaan helay gabo gabada waayihiisa ciyaareed markaas oo culeyskiisu ahaa 96kg.
“Waxaan waydiiyay isaga: ‘Muxuu ahaa miisaankaaga koobkii adduunka ee 2002’. Wuxuu ii sheegay inuu ahaa 84. Waxaan ku iri: ‘Isku day inaad ugu yaraan miisaankaaga ku celiso 88kg’. Si kastaba, wuxuu ahaa ciyaaryahan wayn.
Liverpool oo waynaysa laacib muhiim ah kulanka Swansea City
Arsene Wenger oo qorshahaan la damacsan Mourinho suuqa janaayo